PRIMA BABY: Mirakitra toro-hevitra ho an’ny ray aman-dreny “guide” andiany faha-08. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE PRIMA BABY: Mirakitra toro-hevitra ho an’ny ray aman-dreny “guide” andiany faha-08.
A LA UNEACTUALITEEDUCATIONSOCIAL
PRIMA BABY: Mirakitra toro-hevitra ho an’ny ray aman-dreny “guide” andiany faha-08.
By Nirinajuin 07, 2017, 22:46 0
Efa azo jifaina eny amin’ny tranombarotra fivarotana kojakoja ho an’ny zazakely sy ny ankizy ary trano fivarotam-boky ny “guide prima baby” andiany fahavalo. Hanampy betsaka ny ray aman-dreny izy ity satria ahitana toro-lalana sy toro-hevitra ho azy ireo momba ny fitaizana ny zanaka manomboka any amin’ny fahaterahany. Voatanisa ao anatin’ity “guide” ity ihany koa ny maha zava-dehibe ny fidirana any amin’ireny sekoly ho an’ny ray aman-dreny ireny, ny lakilen’ny fanabeazana mahomby, ireo tokony ho fantatry ny ray aman-dreny sy ny maro hafa.
Amin’ny maha toro-lalana azy, noraketina ao anatiny ihany koa ireo ivon-toerana mitaiza zaza sy ankizy manodidina an’Antananarivo renivohitra.
Ho fanampiana hatrany ny ray aman-dreny amin’ny fitaizana ny zanany manomboka amin’ny fahaterahany ka hatramin’ny fahaenin-taonany, hisy ny fandaharana, natokana ho azy ireo, ho alefa amin’ny fahitalavitra izay mitondra ny lohateny hoe: “tiako ny zanako”.
Previous PostFIFANINTSANANA CAN 2019 : Nomontsanin’i Barea ny ekipa-pirenena avy any Soudan. Next PostBORIBORINTANY FAHA ENINA: Manohana ny hetsika varavarana misokatra ny Orange.